Hotely Monte-Carlo Beach: zava-bita organika GOLD
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Hotely Monte-Carlo Beach: zava-bita organika GOLD
Jolay 4, 2018
Green Globe vao haingana no nanome ny Gold-Monte Beach Beach ho fanekena ny fanamarinana dimy taona nifanesy.
Ny drafitra fitantanana fitohanana maharitra ao amin'ny Monte-Carlo Beach Hotel dia nandrakotra hetsika ara-tontolo iainana sy sosialy manerana ny taona maro ary manohy manome aingam-panahy ny fananana miaraka amin'ny vaovao maitso farany.
Mandia Organika ny morontsiraka Monte-Carlo
Hatramin'ny 2013, ny trano fisakafoanana any Monte-Carlo Beach Elsa dia nahazo mari-pahaizana Bio (biolojika) avy amin'i Ecocert, ny mpitarika frantsay amin'ny fanamarinana biolojika.
Elsa no trano fisakafoanana gourmet voalohany ao amin'ny faritra Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) nahazo ny sokajy 3 fanamarinana voajanahary indrindra. Ny taona manaraka ny taona 2014 dia nahazo kintana Michelin Guide ny trano fisakafoanana noho ny talenta sy ny fahaizan'ny Chef Executive Paolo Sari ary ny kalitaon'ny vokatra vaovao, eo an-toerana sy ny organika. Androany ny trano fisakafoanana dimy ao amin'ny Hotel Monte-Carlo Beach (Elsa, Le Deck, La Vigie Lounge & Restaurant, Cabanas ary La Pizzeria) dia mampiasa voankazo sy legioma 100%. Ny vokatra biolojika dia misy ihany koa ao amin'ny bar, minibars ary atolotry ny serivisy amin'ny efitrano.
Ny spa ao amin'ny Monte-Carlo Beach dia manolotra fitsaboana amin'ny hoditra avo lenta miaraka amin'ny Phytomer Cosmetics, famolavolana voajanahary manokana izay manome fomba vaovao amin'ny fikolokoloana hatsarana voajanahary. Ankoatr'izay, aleon'ny trano fandraisam-bahiny ny shampoo biolojika Casanera, gel mando ary kojakoja fanosotra amin'ny vatana izay vita 100% tao Corsica. Tanjona ny hanitatra ny politikam-pamboleny amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo vokatra hafa toa ny kojakoja volotsangana azo alefa sy ny kafe voajanahary Fairtrade novokarin'ny marika frantsay tompon'andraikitra Malongo.
Tamin'ny 2014, nanao sonia ny The Relais & Chateaux Vision tao amin'ny UNESCO any Paris i Monte-Carlo Beach. Ity Vision ity dia manentana ireo nanao sonia mba hanao hetsika isan-karazany tompon'andraikitra ao anatin'izany ny fanohanan'ny tantsaha sy ny mpanjono ao an-toerana, hiarovana sy hampiroborobo ny zava-manan'aina, hampirisihana ny jono tompon'andraikitra, hampihena ny fako ara-tsakafo, hitsitsy angovo sy rano ary hanome fepetra miasa tsara ary ny karaman'ny mpiasa.
La Route du Gout (Làlan'ny tsiro)
Niara-niasa tamin'ny Chef Paolo Sari ho an'ny La Route du Gout, festival amin'ny gastronomia gastronomia ny Monte-Carlo Beach. Chef Paolo no chef kintana Michelin kintana voamarina eran'izao tontolo izao. Ny tanjon'ny festival dia ny fampiroboroboana ny tsirairay - mpikambana amin'ny besinimaro, ny ankizy, ny mpitarika ary ny andrim-panjakana - mba hampiroborobo ny hetsika ekolojika sy hamatsy ara-bola ireo asa soa samihafa. Misaotra ny Bio Chef Global Spirit Association natombok'i Chef Paolo Sari, ny tetik'asa maha-olona amin'ny fananganana ny Moné & Paolo Sari Culinary School of Arts & Hospitality dia ho vita hatramin'ny Oktobra 2018.
Nandritra izay telo taona lasa izay, ny Monte-Carlo Beach dia nampirafy ny ankizy 8 ka hatramin'ny 13 taona, ny Société des Bains de Mer: Chef mpanatanteraka sy ny fisakafoanana miaraka hiara-mamorona lovia fandrahoan-tsakafo izay aroso mandritra ny fiaraha-misakafo Gala malaza ao La Route du Gout Festival natao isaky ny Oktobra.
Ny ankizy dia manana fotoana hanandramana vokatra isan-karazany ary hanampy ny mpahandro amin'ny fandrahoan-tsakafo marefo sy gastronomika. Miara-manomana buffet biolojika misy lohahevitra izy ireo, izay aseho amin'ny tontonana matihanina ary koa ho an'ireo nasaina. Zaridaina legioma biodamika mitsingevana manarona 300 metatra toradroa no noforonina manokana ho an'ilay hetsika ao amin'ny Marina Monaco.
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo manisoft.ir manisoft.ir , [email voaaro] na jereo ny horonantsary.
Ao anatin'ny fankalazana ny Andro eran-dranomasina eran-tany ny 8 jona lasa teo dia nanolotra "Meet & Greet" miaraka amin'ny mpanjono malaza Monegasque Andriamatoa Eric Rinaldi ao amin'ny Port Hercule Monaco ny Beach-Monte-Carlo. Nasaina ihany koa ireo vahiny mba hanangona sy hankafy aperitifitra mahafinaritra miaraka amin'i Chef Paolo Sari arahin'ny sakafo antoandro gourmet organika ao Elsa, ilay fisakafoanana fisakafoanana tsara.
Andro eran-tany an-dranomasina:
Havoana mena manta avy any San Remo, fennel zazakely, tsiro apricot ary caviar nacarii
Trondro Scorpio Tagliolini paty misy voatabia sakamalao
Mullets mena eo an-toerana, tsaramaso fava, puree ary anana zaza
Fantatra ny voaroy mena
Kafe sy mignardise ara-barotra marina
Seoul hampiantrano ny Vovonana Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena UNWTO faha-7 momba ny fizahantany an-tanàn-dehibe
Mampitandrina ny mpizahatany i Shina momba ny 'herisetra amin'ny basy, fandrobana, fitsaboana ara-pahasalamana lafo vidy, loza voajanahary' any Etazonia